Nkedo: Ihe Ngwọta Ọdịnaya Ahịa maka Ntanetị |lọ Ọrụ | Martech Zone
Mepụtara site n'echiche na mkparịta ụka kwesịrị ịbụ n'okwu na ọdịnaya ahịa niile, Gbasara bụ naanị usoro ịzụ ahịa ọdịnaya e wuru iji mee ka ndị ahịa nwee ike ịnweta, nwekwuo, ma kwupụta ọdịnaya ha na Podcast iji mee ka atụmatụ ahịa ọdịnaya ha dum.
N'adịghị ka azịza ahịa ahịa ndị ọzọ, nke e wuru iji nyere ndị na-ere ahịa aka iwepụta ọtụtụ ọdịnaya ederede, Gbasara na-eme ka ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma site na iji ụzọ ọdịyo-nke mbụ. Site na ikpo okwu Casted, ndi ahia nwere ike ijikota ike nke mkparita uka iji meputa ihe bara ọgaranya, nke di nkpa, nke ndi okacha amara nke na-aru oru ma nyefee ihe ndi egosiputara.
Nchịkọta 3 A
Nzọụkwụ mbụ bụ ịdekọ mkparịta ụka gị na ọkachamara n'okwu gbasara isiokwu. Site n'ebe ahụ, enwere ike ọ bụghị naanị bipụtara ọdịnaya nke mkparịta ụka ahụ dị ka pọdkastị, kamakwa ịghaghachiri na plethora nke ahịa ahịa dị ka ederede blog, ọdịnaya mgbasa ozi mmekọrịta, eBooks na ndị ọzọ.
Casted na-enye ndị ahịa ezi nloghachi na itinye ego ha na Podcast site na mmụba ohere na ọdịnaya ọdịyo ndị otu ndị ọzọ, ngalaba, na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ga-eji. Ikpo okwu na-enye ọtụtụ ụzọ kwusi ọdịnaya ahụ gafere ọwa ndị ọzọ. N’ikpeazụ, Casted na-enyebeghi ụdị ya Attribution nke ahụ na-ekpughe mmetụta nke ọdịnaya na-eme na ika na azụmaahịa ahụ.
Nweta: Jide ike nke nghọta ị na-achịkọta site na mkparịta ụka gị na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ, ndị ahịa, ndị isi ime obodo, ndị mmekọ, na ndị ọzọ na pọdkastị gị site na ime ka ndị otu ndị ọzọ, ngalaba, na ndị ọrụ ụlọ ọrụ nweta ọdịnaya ahụ.
Meekwuo: Ikpochapu mkparịta ụka ọ bụla n'ime ọdịnaya pụrụ iche nke juputara n'echiche gị na nka maka oke uru ndị na-ege gị ntị ga-eji gafee ọwa ahịa ọ bụla.
àgwà: Ghọta mmetụta pọdkastị gị nwere na azụmaahịa gị yana data nwere ike ịrụ ọrụ dị ka akara aka na nchịkọta ndị na-ege ntị.
Site na ịpị aka n'ime ọdịnaya Podcast, ebumnuche bụ ka ndị ahịa nwee ike ịmekọrịta usoro, nke otu akụ (pọdkastị) na-agbanye ugbu a na mbọ.
Ahịa Mkparịta ụka mma omume
Tọn̄ọ ye Nneme
Site na otu ikpo okwu nke etiti, ndi otu ahia nwere ike ichota ihe puru iche nke ekpughere na mkparita uka nke ndi okacha amara - obughi nani dika onodu Podcast, kamakwa dika mmanu maka uzo ahia ndi ozo.
Akpa, Gbasara na-eje ozi dị ka a ika si Podcast Bochum n'elu ikpo okwu, na-ekwusara ọ bụla merenụ ka Podcast Player dị ka Apple, Spotify, na Google, na-eke a n'ụlọ maka show na ika onwe website site peeji nke kere ozugbo na ikpo okwu.
Site n'ebe ahụ, Casted gafere nnabata na nchịkọta iji nye nnweta dị mfe na ọdịnaya ọdịyo ahụ iji melite mmekorita gafee ndị otu iji bulie ozi site na nke ọ bụla site na ịkọwa ya n'ofe ọwa ndị ọzọ. Nke a gụnyere peeji ngosi ngosi ahaziri, ntụgharị iji kwado SEO na ọdịnaya edere ederede, mkpokọ na okike ihe ọdịyo maka mgbasa ozi mmekọrịta, itinye maka ntanetị na ọdịnaya email, njikọta na nyiwe dịka HubSpot, Drift, na WordPress, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, Casted na-enye usoro gbasara njikọ ndị na-ege ntị, na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịghọta na ịkekọrịta mmetụta pọdkastị na ọdịnaya metụtara ya na-eme na ụdị na azụmaahịa ahụ.
Jiri Podcasting dị ka ihe ederede
N’etiti, pọdkastị ika na - ere ọla edo: mkparịta ụka zuru oke na ndị ọkachamara na - ekpughe echiche mbụ, nghọta onye isi, yana akụkọ ndị ahịa. Site na nghọta dị ike dị otú ahụ, pọdkastị kwesịrị ịdị n'etiti atụmatụ aghụghọ, na-eme ka ọdịnaya ndị ọzọ niile dị elu.
Otú ọ dị, ọtụtụ mgbe, pọdkastị ndị a bụ siled. A na-ekpochi ọdịnaya nke ọdịyo na ihe ndị ọzọ nke ika ahụ wee hapụ ndị ọzọ na-ahụghị ya. N'ihi gịnị? N'ihi na emeghị ngwaọrụ Podcast maka otu ndị ahịa na usoro ịre ahịa ọdịnaya ka arụ ọrụ na pọdkastị. Enweghị ụzọ dị mfe maka ndị otu iji nweta ọdịnaya ahụ ma jiri ya gafee ọwa ndị ọzọ.
Tinye Casted, naanị usoro ịzụ ahịa ọdịnaya nke e wuru iji nyere ndị na-ere ahịa ohere ịnweta, bulie, ma kwupụta ọdịnaya ha na pọdkastị dị ka mmanụ ọkụ maka atụmatụ ahịa ọdịnaya ha niile. Iji usoro ọdịyo-izizi na azụmaahịa ọdịnaya, pọdkastị ika na-eme dị ka usoro nke ọwa ọdịnaya ndị ọzọ niile.
Podcast Ihe Akaebe
Mkparịta ụka na-akwado njikọ ọ bụghị naanị n'etiti ndị nwere mkparịta ụka ahụ, kamakwa ndị ọzọ niile na-ege ntị. Ndị na-ege ntị na-emekọrịta nkekọ n'etiti ha na ụmụ mmadụ na-enwe mkparịta ụka a yana akara n'azụ ha niile.
Njikọ ndị a na-agbanwe mgbanwe. Mgbe ndị na-ege ntị ahụ nwere njikọ na ika ahụ, ha nwere ike ịga n'ihu ịghọ ndị ahịa. Were ọmụmụ ihe a nke BBC kwubiri:
Ika kwuru na pọdkastị anapụta na nkezi:
16% ntinye aka dị elu na 12% nchekwa dị elu karịa ọdịnaya gbara ya gburugburu. Nke a bụ mmetụta pụrụ iche, dịka akara ngosi redio zuru ụwa ọnụ na-egosi na akara ahụ kwuru na nkezi akara 5% dị ala karịa ọdịnaya.
Mmekọrịta chiri anya na mkparịta ụka nke gburugburu Podcast na -emepụta ọnọdụ mmekọrịta dị elu maka akara aka. Nke a na-emekwa ka usoro metrik dị iche iche gafee osisi ahụ, na-enyere aka ịmepụta mbuli elu na mmata (↑ 89%), ịtụle akara (↑ 57%), ihu ọma akara (↑ 24%), na ịzụta ebumnuche (↑ 14%).
94% nke ndị na-ege ntị na-eri pọdkastị mgbe ha na-arụ ọrụ ndị ọzọ
Ndị mmadụ na-ege ntị na pọdkastị ma na-ata ahịhịa, na-agagharị, na-akwa akwa, ma ọ bụ na-arụ ọrụ. Nke a pụtara ụdị ndị na-ekepụta ihe, pọdkastị na-atọ ụtọ nwere ikike iji nweta oge ha na ndị na-ege ha ntị.
Hazie Ngosipụta Ngosipụta Taa
Tags: ohereàgwàaudioọdịnaya ọdịyogbuecontent Marketingenterpriseenterprise Podcast ngwọtapodcastpọdkastịPodcast azumPodcast atụmatụnchịkọta PodcastPodcastingụkọọdịnaya vidiyo